Article of Dr. Nay Zin Latt | The World of Pinkgold
Mhaw Sayar on January 16, 2009 at 12:42 pm said:
သိပ်ကောင်းတယ်ဗျို့. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ. မိသားစု တစ်စု ထဲက အစ. ရှိတယ်ဆိုတာကို သဘောကျတယ်ဗျ.
ဆက်ရန်ကို စောင့်မျှော်နေကြောင်း. 🙂
thantzin on March 27, 2009 at 12:19 pm said:
nyein chan on July 24, 2011 at 12:11 pm said:
Thank for your post. I am reading Dr, Nay Zin Latt ‘s books now,I like it,